भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्दै कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल
२०७८ असोज २३ शनिबार ०६:०२:००
दिल्ली भ्रमणमा रहेको सत्तारुढ कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरलाई भेटेर सीमावार्ता सुरु गर्नुपर्ने र दार्चुला तुइन प्रकरणको फेरि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार अपराह्न भएको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलका नेता पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति डा. प्रकाशशरण महतले तुइनबाट महाकालीमा खसेर बेपत्ता दार्चुलाका जयसिंह धामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत जयशंकरको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जयशंकरले नेपाल बलियो होस् भन्ने भारतीय चाहना भएको भन्दै नेपाल सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य भइरहेको र जारी रहने बताएका थिए । महतका अनुसार जयशंकरको भनाइ थियो, ‘हामी देउवा नेतृत्वको सरकारसँग अत्यन्त नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार छौँ । सरकारलाई हाम्रो शुभेच्छा र सहयोग निरन्तर रहन्छ । नेपाल बलियो होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने, नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोपसहित थप खोप आपूर्ति गरिदिने पनि उनले आश्वासन दिएका छन् । ‘मिति नै यकिन गर्न त सक्दिनँ, तर नेपाललाई हामी चाँडै नै खोप आपूर्ति गर्छौँ, आवश्यक ठाउँमा सहजीकरण र समन्वय गरिदिन्छौँ,’ जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै महतले भने, ‘तुइन प्रकरणमा एसएसबी संलग्न छैन भन्ने रिपोर्ट हामीकहाँ आएको छ ।’
तर, तुइन प्रकरणमा पुनः छानबिन गर्न आग्रह गरेको महतले बताए । ‘एसएसबीले जे रिपोर्ट दिए पनि एकपटक हेरिदिनुस्, जनताको भावनात्मक सम्बन्धको कुरा छ भनेका छौँ, उहाँले सकारात्मक रेस्पोन्स गर्नुभएको छ,’ महतले भने ।
विदेशमन्त्री जयशंकरले कांग्रेस र भाजपाबीच राजनीतिकस्तरमा भएको छलफल आदानप्रदानले दुई देशको सम्बन्धमा समेत योगदान दिने बताएका थिए । ‘राजनीतिक तहमा पनि समानान्तर च्यानलको विकास भएको छ, यसले दुई देशको सम्बन्ध विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ,’ जयशंकरको भनाइ थियो ।
महत नेतृत्वको टोली शनिबार उत्तरप्रदेशको लखनउ पुगेर मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार दिल्ली पुगेको टोलीले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग बिहीबार अपराह्न भेटवार्ता गरेको थियो ।
नेपाललाई निरन्तर सद्भाव : राहुल गान्धी
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले नेपालप्रति उनको पार्टीले निरन्तर सद्भाव राखिरहेको बताएका छन् । बिदाइ भेटका लागि निवास पुगेका नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा गान्धीले उनको पार्टीले स्थिर नेपाल नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे ।
‘हामीले नेपालको लोकतन्त्र, स्थिरता, विकास, समृद्धिका पक्षमा शुभेच्छा राख्दै आएका छौँ, हाम्रो शुभेच्छा र सहयोग भविष्यमा पनि जारी रहन्छ,’ गान्धीले भने । उनले नेपालको हितका विषयमा भारत सरकारका विभिन्न निकायसँग कंग्रेसले आवश्यक परेमा सहजीकरण गरिदिनेसमेत आश्वासन दिएका छन् । ‘असाध्यै राम्रो कुराकानी भयो, राहुल गान्धीजीले नेपाललाई निरन्तर शुभेच्छा र सहयोग छ भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ राजदूत आचार्यले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने । भेटवार्तामा नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी पनि सहभागी थिए ।
#कांग्रेस # प्रतिनिधिमण्डल
६१ जिल्लामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व, १६ जिल्लामा महाधिवेशनपछि मात्रै अधिवेशन (सभापतिको नामावलीसहित)